02/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Hain-trano tany Mananjary : Trano 385 ravan’ny afo
02/10/2018 admintriatra 0
Nandripaka tao an-tampon-tanànan’i Mananjary indray ny afo, ny alin’ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina tany ho any. Lasa lavenona avokoa ny trano manodidina 385, avy ao amin’ny fokontany roa samihafa, tao …Tohiny
Tanora mpandraharaha : Hifarana amin’ny talata ny fifaninanana
Fanomezana sehatra ireo tanora amin’ny fandraharahana. Efa nisokatra tamin’ny volana aprily lasa teo, ary hifarana ny talata 09 oktobra izao ny fifaninanana tanora mpandraharaha, karakarain’ny Bni Madagascar. Toa ireo andiany teo aloha, tanjona amin’ity andiany …Tohiny
Analakely : Gaboraraka ny tsena
Mitohy ny gaboraraka ataon’ny kaomina Antananarivo Renivohitra amin’ny fitantanana ny tsena, indrindra ny eny Analakely. Naha be resaka ny maro izao ny tsena vaovao eo ampitan’ny pavillon io. Tsy ny fanamboarana ny tsena akory no …Tohiny
Prefektiora Antananarivo : 48 ora mialoha ny fangatahana toerana
Ny herinandro ho avy izao, dia ho safononoka fampielezan-kevitra ny tanàna, manoloana izany dia nanatsara sy nitondra fampatsiahivana ny teo anivon’ny prefektiora Antananarivo. Mba tsy hisian’ ny olana amin’ny toerana hanatanterahana fampielezan-kevitra, dia nilaza ny …Tohiny